Football Khabar » ला लिगाले ग्रीजम्यानको ‘ट्रान्सफर रोक्ने’ सम्भावना कति छ ?
ला लिगाले ग्रीजम्यानको ‘ट्रान्सफर रोक्ने’ सम्भावना कति छ ?
हालै स्पेनिस बार्सिलोनाले अनुबन्ध गरेका फ्रेन्च स्टार एन्टोनी ग्रीजम्यानको सरुवामा प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना बढेको छ । घरेलु लिग ला लिगाले ग्रीजम्यानको सरुवामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकतम् सम्भावना रहेको ला लिगाका अध्यक्ष जाभिर टेबास स्वयंले बताएका छन् ।
बार्सिलोनाले दुई साताअघि एथ्लेटिको मड्रिडबाट ग्रीजम्यानलाई १२० मिलियन युरोमा भित्र्याएको थियो । बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानको रिलिज क्लज १२० मिलियन युरो ला लिगाको कार्यालयमा जम्मा गरेर सामाजिक सन्जालबाट एक पक्षीय रूपमा खेलाडी अनुबन्धको घोषणा गरेको थियो ।
तर, तुरुन्तै एथ्लेटिकोले एक विज्ञप्ति निकालेर बार्सिलोनाले ‘नियमबिपरीत’ आफ्ना खेलाडी लगेको भन्दै थप ८० मिलियन युरो रकम माग गरेको थियो । एथ्लेटिकोले ग्रीजम्यानका लागि २०० मिलियन युरो माग गरेको छ ।
गत जुलाई १ मा दुई क्लबबीच ग्रीजम्यानको रिलिज क्लज २०० मिलियनबाट १२० मा झार्ने समझदारी बने पनि खेलाडी किनबचेमा दुई क्लबको समझदारीबाट मात्रै गर्ने सहमति बनेकोमा बार्सिलोनाले एकपक्षीय रूपमा आफ्ना खेलाडी भित्र्याएको भन्दै एथ्लेटिकोले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
त्यसको केही दिनपछि एथ्लेटिकोले बार्सिलोनाबाट २०० मिलियन युरो माग गर्दै ला लिगामा मुद्दा हालेको थियो । हाल ला लिगाले सो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । एथ्लेटिकोले ला लिगाबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए फिफामा समेत बार्सिलोनाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ ।
‘बिबिसी’का अनुसार ला लिगाका अध्यक्ष जाभिर टेबासले एथ्लेटिकोले हालेको मुद्दामा गम्भीर छानबिन चलिरहेको बताउँदै चाँडै निर्णय आउने बताएका छन् । उनले एथ्लेटिकोले प्रमाणसहित बार्सिलोनाविरुद्ध उजुरी गरेकाले हालकै अवस्थामा अनुसन्धान अघि बढे ग्रीजम्यानको सरुवा रोकिन सक्ने बताए ।
‘हालसम्मको अवस्था हेर्दा खेलाडीको सरुवामा प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना प्रबल छ । तर, अन्तिम निचोड आउन बाँकी छ,’ टेबासले भनेका छन् ।
यदि ला लिगाको छानबिनमा बार्सिलोनाले नियमबिपरीत खेलाडी अनुबनध गरेको पुष्टि भए ग्रीजम्यानको सरुवा रद्द हुनेछ भने बार्सिलोनामाथि कम्तीमा एक सिजन सिजन खेलाडी किन्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ ।
ग्रीजम्यानले बार्सिलोना भित्रिकन एक खेल खेलिसकेका छन् । जापानमा राकुटेन कपअन्तर्गत उनको डेब्यु खेलमा बार्सिलोना इंग्लिस क्लब चेलसीसँग २–१ ले हारेको थियो ।
प्रकाशित मिति ९ श्रावण २०७६, बिहीबार ०३:०१